Isbahaysiga Marquette Park waxay kor u qaadeen $ 7000 • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Isbahaysiga Marquette Park waxay aruurinayaan $ 7000
Bartamaha Magaalada Dutchtown (DT2) ayaa hogaaminaya koox cusub, Isbahaysiga Marquette Park (AMP), In diirada la saaro abuurista iskaashiyo dowladeed iyo kuwa gaar loo leeyahay oo loogu talagalay in maalgashi loogu kaxeeyo Marquette Park.
Bishii Luulyo 17th, AMP iyo DT2 waxay ku qabteen lacag uruurin filim Dive-In Movie barkadda dabaasha oo si lama filaan ah isugu rogtay muuqaal gudaha ah markii nidaam cimilo daran oo bartamaha galbeed ka soo muuqday meel aan ka jirin oo uu ku qooyay St. Louis.
In kasta oo duufaano culus, in ka badan 50 deris u go'an iyo xulafadooda ayaa soo muuqday si ay roobka ugu istaagaan Gawaarida Cuntada Guerrilla Street, cab Chestnut MagaaladaNoocyadiisii ​​ugu fiicnaa, oo daawo filimkii 80s-kii caadiga ahaa sayrin gudaha Marxaladda Marxaladda Jimicsiga.
Fiidiyowga maal-u-baahan, ee ay soo saartay Isgoyska Grand, sifiican ayaa loo qaabilay waxaana lagu dhiira geliyay $ 2000 tabarucaad dadaalka barkadda. $ 1000-kii ugu horreeyay waxaa 5 jeer ka barbardhigay wada-hawlgalayaal gaar loo leeyahay oo ay caddeeyeen DT2 wadar ahaan in ka badan $ 7000 oo u jiheysan doonta alaabta barkadda iyo waxyaabaha cusub ee xagaaga 2020.
Barkadda Marquette ka Isgoyska Grand on vimeo.
Roob dartiis filimka barkadda, DT2 ayaa qorsheyneysa inay martigeliso dhacdo la isku qurxiyo oo u furan dadweynaha. Raac DutchtownSTL.org si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda iyo waqtiga dhacdada isku qurxinta.
Miyaad seegtay munaasabadda? Waxaad ku arki kartaa tabaruca at Dutch.town/pool.
Filimka hoos Beerta Marquette. Muuji dhamaan qeybaha. DT2, Dutchtown, Xisaabiyeyaasha, Iyo Beerta Marquette. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay July 23rd, 2019 .
DutchtownSTL.org Beerta Marquette Isbahaysiga Marquette Park waxay aruurinayaan $ 7000